Ahoana ny fomba hanarahana ny fandefasana ireo fitaovanao nividy tany Sina | Vaovao momba ny gadget
Lasa miha-mahazatra antsika ny manapa-kevitra momba ny fanafarana entana. Matetika isika dia miafara amin'ny mividy any amin'ny magazay toa GearBest, Aliexpress ary ireo manam-pahaizana manokana amin'ny fanafarana antsinjarany mitovy amin'izany hahazoana ny vokatra elektronika mpanjifa. Ny antony mazàna dia miovaova amin'ny safidy roa: Ny vokatra / marika tiana hovidiana dia tsy misy amin'ny tsena eropeana; Ny vokatra / marika izay tadiavinay dia mora vidy kokoa amin'ireto mpanelanelana aziatika ireto ary misoroka ny mpanelanelana eropeana. Na inona na inona antony, mazàna dia somary miadana ireo fandefasana ireo, indrindra raha tsy mikasa ny hijaly amin'ny fandaniam-bola fanampiny izahay noho ny saram-pitantanana apetraky ny orinasa toy ny DHL. Androany dia hanome torohevitra vitsivitsy momba ny fanarahana ny fandefasana entana novidina tany Shina izahay.
Andao atomboka amin'ny fototra, ny antony mahatonga ireo fandefasana ireo hijaly amin'ny fitaterana miadana toy izany. Imbetsaka ny vidin'ny fandefasana entana dia azo tsinontsinoavina na eo aza ny halavirana, izany dia satria ireo vokatra ireo dia mazàna navesatra amin'ny sambo lehibe na fiaramanidina miaraka amina fampiasana mitovy, noho izany dia mampiasa kaontenera lehibe, ny vokatra manokana dia tsy andefasana orinasa manokana, mahatonga ny fotoana eo anelanelan'ny fandefasana tena malefaka. Amin'ny ankapobeny, ireo fandefasana ireo dia amin'ny alàlan'ny orinasam-paositra ho an'ny daholobe, ary miafara amin'ny alàlan'ny Correos España. Ho fanampin'izany, ny vidin'ity vokatra ity dia miakatra be rehefa ampitain'ny orinasa tsy miankina izy ireo satria manome antoka ny vokatra mandalo ny fadin-tseranana izy ireo, izay hisy akony amin'ny fandoavana ny VAT mifanaraka aminy sy ny saram-pitantanana sy ny saram-pitantanana mitovy amin'izany, amin'ny ankapobeny dia manararaotra amin'ny orinasa toa DHL. Raha fintinina, matetika ireo entana ireo dia eo anelanelan'ny 14 sy 30 andro fiasana. Hanolotra safidy roa hafa ho anao izahay hanaraha-maso ireo fandefasana tena hafahafa ireo, izay mazàna mitazona anay tsy hatoky tena.
1 Araho ny baiko avy any Shina amin'ny alàlan'ny tranonkala
2 Fampiharana finday hanarahana ny fandefasana entana avy any Shina
Araho ny baiko avy any Shina amin'ny alàlan'ny tranonkala
Ny fomba voalohany hodinihintsika dia ny fanarahana ny tranokala, izany hoe ireo pejin-tranonkala izay tsy maintsy alehantsika raha ny tadiavintsika dia ny manara-maso fandefasana. Ireo orinasa izay nanaovantsika ny fividianana, amin'ny ankapobeny hanome antsika "Isa fanarahana" izahay mba hahafahantsika mahafantatra ny fotoana nandefasana ilay fitaovana ary noho izany dia ho mailo bebe kokoa mandritra ny dia, na dia ratsy kokoa noho ny faharetana aza ny fitandremana be loatra, dia hitahiry azy bebe kokoa noho ny zava-drehetra ho rakitra tsara isan-kerinandro.
Handao ny lisitry ny pejy manokana amin'ny fanarahana ny fandefasana entana aho ary ny antony hisafidianako azy ireo, hiditra ao aminy dia tsindrio ilay anarana ary hamindra anao izy:
Làlana manaraka: Ity ho ahy no tsara indrindra, misy ny ankamaroan'ny orinasa manam-pahaizana manokana, amin'ny ankapobeny dia hahazo ny fanarahan-dia isika na inona na inona fomba fandefasana, tsy mandeha foana izany, fa io no tsy mahavita kely indrindra ary mila mandray an-tanana kaonty ny be indrindra araka ny zavatra niainako.
Paositra: Ny tranokala Correos dia tsy hanome afa-tsy fampahalalana ho anay raha vao tonga any Espana ilay fonosana, midika izany fa rehefa mipoitra ao amin'ny tranokala Correos dia hatolotra eo amin'ny 4 andro farafahakeliny ny fonosana.
Fandefasana miaraka amin'i China Post
Fandefasana miaraka amin'i HongKong Post
Fandefasana miaraka amin'i Singapore Post
DHL: Raha indrisy fa nifidy ny handefa miaraka amin'ny DHL isika dia tsy maintsy miomana amin'ny vidin'ny fandoavana ny ladoany raha tsy hoe nalefa ho fanomezana latsaky ny € 20 ilay fonosana.
Fampiharana finday hanarahana ny fandefasana entana avy any Shina
Androany dia tsy misy serivisy tsy misy ny fampiharana azy manokana ho an'ny finday, noho izany ny fanarahana ny fandefasana ireo fonosana fanafarana dia tsy azo avela ao anaty bubble app. Noho izany, hasehonay anao ny sasany amin'ireo safidy tsara indrindra amin'ny fampiharana ho an'ny iOS sy Android izay ahafahana manara-maso ny fandefasana anay avy any Shina na avy amin'ny toerana rehetra manerantany:
fonosana: Ny tena feno sy malaza indrindra, indrisy fa tsy amin'ny iOS irery no misy azy fa io no safidy tsara indrindra. Izy io koa dia ahitana fampiharana ho an'ny marika Apple Watch sy fandefasana. Rohy fampidinana
AfterShip: Ny malaza indrindra amin'ny tontolo Android, ny fanarahan-dia amin'ny fandefasana entana maimaim-poana miaraka am-pitadiavana mandeha ho azy ny orinasa miandraikitra sy ny rafitra fanamoriana, tena atoro anao. Rohy fampidinana.
Làlana manaraka: Toa mahazatra izany, niresaka momba izany isika minitra vitsy lasa izay, ity tompona tranokala teo aloha ity dia mitantana ity rindrambaiko ity ary mahomby toa izany ihany koa, ampidina amin'ny fipihana ny rohy: ANDROID - iOS
Manantena izahay fa ho mora kokoa aminao izao ny manara-maso ny fandefasana anao avy any Shina. Avelao ao anaty hevitra ireo torohevitrao.
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Vaovao momba ny gadget » General » About us » Ahoana ny fomba hanarahana ny fandefasana ireo fitaovanao nividy tany Shina
Sivana avy any Shina ny antsipirian'ny Google Pixel sy Pixel XL